515 Andro Taty Aoriana, Mitarika Fanontaniana Maro Ho An’ny Fianakaviana Ny Potipoti-javatra Hita Tamin’ilay Fiaramanidina 370 Tao Shina · Global Voices teny Malagasy
515 Andro Taty Aoriana, Mitarika Fanontaniana Maro Ho An'ny Fianakaviana Ny Potipoti-javatra Hita Tamin'ilay Fiaramanidina 370 Tao Shina
Voadika ny 31 Aogositra 2015 6:24 GMT
Ny 7 aogositra teo, nipetraka teo ivelan'ny masoivohon'i Malezia ao Beijing ireo fianakavian'ny MH370. Sary avy tamin'ny mpampiasa Twitter: Tom Philips
Taorian'ny herinandro iray nandinihana ireo potipoti-javatra tonga teo amin'ny tanin‘ny Nosy La Réunion izay nataon'ireo ekipan'ny fanadihadiana iraisam-pirenena, “nanamafy tsy nisy fihambahambana” ny Praiminisitra ao Malezia fa avy amin'ny elatr'ilay fiaramanidina “Sidina Malaysia Airlines 370″ avy any Beijing ila potika elatra .
Fa tamin'ny resaka ho an'ny mpanao gazety nataony dia somary nisalasala ihany ireo mpiara-miasa frantsay mpanadihady. Nambaran'izy ireo fa “betsaka ny ahafahana manombatombana” hoe potipoti-javatra avy amin'ilay Boeing 777 ireo, izay nanjavona ny maraimbe tamin'ny 8 martsa 2014, taorian'ny nialàny tao Kuala Lumpur.
Ny 6 aogositra aza,nandefa mailaka iray ho an'ny fianakavian'ireo tsy hita ny “Malaysia Airlines”, izay nilaza fa efa niara-voamarin'”Ireo Tompon'andraikitra Frantsay, ny Biraon'ny Fanadihadiana sy Fandalinana ho an'ny Fiarovana ny Sidina Fiaramanidina Sivily (BEA), ny Ekipa Maleziana Mpanadihady, ny Solontena Ara-teknika avy amin'ny PRC sy ny Australian Transportation Safety Bureau (ATSB), fa avy tamin'ny sidina 370 ireo potipoti-javatra ireo.
Ireo fifanoheran-kevitra ireo no nandrehitra indray ny hasosorana teo amin'ireo fianakavian'ny mpandeha tao anatin'ilay fiaramanidina tsy hita.
Vao tsy ela akory, nivondrona teo ivelan'ny biraon'ny “Malaysian Airlines” ao Beijing ireo fianakaviana sinoa ny 6 Aogositra teo, mangataka tatitra feno mikasika ilay fiaramanidina nianjera, mbola mitomany ireo malalany tsy hita. Mpitandro filaminana ampolony no nibahana azy ireo tsy hiditra ilay tranobe. Nolavin'ny Malaysia Airlines ny fangatahan'ireo fianakaviana mba hanamoràna ny fandehanana any amin'ny nosy La Réunion hijery ny potik'ilay fiaramanidina.
Namoaka taratasy iray tamin'ny aterineto ny komitin'ny ikambanan'ireo fianakaviana, namotsipotsitra ny “Malaysia Airlines” miaraka amin'ireo andian-teboka mampiahiahy momba ilay potipotik'elatra hita :
Hitan'ireo fianakaviana fa mafy ny hanaiky ity fanamafisana maimaika sy tsy mangaraharaha ity. Ahoana no hahazoana manaporofo amin'ireo potipotika fa nianjera tany andranomasina ny fiaramanidina? Ahoana no nanaporofoanao fa vaky vokatry ny loza io fangaro io? Raha tena azo antoka fa nianjera tany andranomasina [ny fiaramanidina], nahoana no tsy vitan'ireo zana-bolana maro nitaratra ny Ranomasimbe Indiana, izay nahalala mazava tsara ireo voron-dranomasina 122, ny hahita fiaramanidina Boeing goavam-be iray nianjera avy any an-danitra? Raha araka ireo manampahaizana izay nanamafy fa natelin'ny ranomasina ny fiaramanidina, mety ho manome lanja tafahoatra ny fahaizan'ny mpanamory izy ireo. Tsy olona mino aho hoe nisy tsikombakomba tao [tamin'ny loza], saingy mampiahiahy kokoa ireo tranga miaraka amin'ny hoe ny fanjakana [Maleziana] izay nahalala fa nihodina teny amin'ny antsasa-dalana ny fiaramanidina, saingy nanitrikitrika ny hampidirana ireo ekipa maro isankarazany iraisampirenena [hikaroka ny fiaramanidina] tao amin'ny Ranomasina Atsimo! Nanana fanamafisana iray avy any Maldives ireo havan'ny [mpandeha] hoe nahita fiaramanidina goavam-be, saingy tsy fantatra mihitsy firy ny laharan'ilay fiaramanidina, na an'iza io fiaramanidina io? Nahoana ny teboka nihodinan'ny fiaramanidina no hita teo faritry ny habakabaka teo amin'ny làlan-tsidina? Betsaka ny fanontaniana no mbola tsy nahitana valiny…..
Tamin'ny tafatafa taty aoriana niaraka tamin'ny vavahadin-tserasera Tencent, nanao fanangonan-tsonia ny komitin'ireo fianakaviana mba hisian'ny fanadihadiana mangarahara kokoa momba ny toerana farany nalehan'ilay fiaramanidina:
Voalohany indrindra, tsy mangarahara ho an'ny vahoaka ny dingana famantarana natao an'ireo poti-javatra nitokana ireo : ny fitakianay – izay tsy noraharahain'ny fanjakana [ao Malezia] – dia ny tokony hanomezan'ny fanjakana [ao Malezia] sy hizaràny ny sary sy angon-drakitra misy antsipirihany bebe kokoa amin'ny vahoaka, ary hiaraka amin'ny vahoaka mahaleotena [tsy miankina] amin'ny fanjakana mba hamantatra izay niavian'ireo potipotika ireo. Faharoa, tena lavitra hiheverana ireo lazaina ho potipotik'ilay fiaramanidina ireo ho afaka hanaporofoana fanianjera tany andranomasina ny sidina. Raha izany no izy, tsy maintsy ho maro ireo potipotika natao ho porofo. Ny vakin'ilay fiaramanidina hita ankehitriny dia tsy afaka hanekena tanteraka izay nalehan'ilay sidina.
Marika famantarana mivezivezy be niely patrana nanasongadina ny alina 515 ts nahitana tory ho an'ny fianakavian'ireo mpandeha tamin'ilay fiaramanidina tsy hita
Amin'ny maha-media mifamatoka amin'ny antoko eo amin'ny fitondra ny the Paper, notateriny tamin'ny 7 aogositra fa maro tamin'ny fianakavian'ireo tsy hita niaraka tamin'ilay fiaramanidina no mijaly vokatry ny ady trosa navelan'ireo mpandeha. Saingy manohy mandà ny onitra ofisialy ry zareo mandra-pahatratrarana fehin-kevitra voalanjalanja.
Mbola mitohy milona ao anaty alahelo ireo havana, izay mikiky ny ara-tsaina sy ny ara-batan'izy ireo. Ao amin'ny Weibo, toy ny Twitter ho an'i Shina, havana iray — izay ny anarany ety anaty efijery dia “A wandering fish – Trondro mirenireny” — nampiseho ny pikantsarin'ilay mailaka fanamafisana avy amin'ny Malaysia Airlines tamin'ny 6 aogositra teo, nitarika fihetseham-pony nila ho tonga yamin'ny famoizam-po :
Nandritra ny 515 andro lasa, tsy nahavita nihinan-kanina aho sady tsy nahita tory, saingy mijoro mba ho tahaka ny olona ara-dalàna ivelan'ny trano. Andro maromaro lasa izay, nanao fitiliana rà toy ny fahazarana aho, nilatsaka ho 62 ny tahan'ny liomena, saingy mbola niezaka ny hatanjaka aho mba hiandry ireo vaovao sasany. Na izany aza, inona no andrasako? Nanamafy ny mailaka avy amin'ny Malaysia Airlines tamin'ny 2 maraina, fa ireo potipotika [elatra] dia ampahany tamin'ny fiaramanidina 370. Fa nahoana? Tsy fantatro hoe ahoana?